OSX ရှိ Hosts များ သုံး၍ ဒေသအလိုက် DNS ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသလား။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 21, 2019 သောကြာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2019 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို hosting hosting account တစ်ခုသို့ပြောင်းလိုက်သည်။ သူတို့နှင့်သူတို့၏ဒိုမိန်း၏ DNS ဆက်တင်များကို A နှင့် CNAME မှတ်တမ်းများအတွက်အဆင့်မြှင့်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ဆိုက်အသစ် (hosting address အသစ်) (IP Address အသစ်) နှင့်ဖြေရှင်းခြင်းရှိ၊ မရှိဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသောအချိန်တွင်ရှိခဲ့သည်။
DNS ကိုရှာဖွေရာတွင်ပြinနာရှိသည့်အချက်များကိုသတိရသင့်သည်။ DNS မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ခြင်း၊ သင်၏ Domain Registrar မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ခြင်း၊ ထို့နောက်သင်၏အိမ်ရှင်သည်သူတို့၏ domain entry ကိုမည်သို့စီမံသည်ကိုနားလည်ခြင်း။
domain တစ်ခုကို browser တစ်ခုထဲသို့ထည့်သည့်အခါ -
ဒိုမိန်းကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေသည် နာမည်ဆာဗာ တောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့သင့်သည်ဘယ်မှာနေရာချထားရန်။
၀ က်ဘ်ဒိုမိန်းတောင်းဆိုမှု (http) တွင်၊ server ဆာဗာတစ်ခုသည်အလိုရှိသည် သင့် IP address ကိုသင့်ကွန်ပျူတာသို့ပြန်ပို့ပေးသည်.
သင့်ကွန်ပျူတာသည်၎င်းကိုသင်၏ဒေသဟုခေါ်သည်၊ DNS Cache ကို.
တောင်းဆိုမှုကို host သို့ပို့သည်၊ ၎င်းသည်တောင်းဆိုမှုကိုလမ်းကြောင်းပေးသည် ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း နှင့်သင့် site ကိုတင်ဆက်။
သင်၏ Domain Registrar အလုပ်လုပ်ပုံ
ဒီအကြောင်းမှတ်ချက်တစ်ခု…ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်သူတိုင်းသည်သင်၏ DNS ကိုအမှန်တကယ်စီမံခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၌ client တစ်ခုရှိသည်၊ ဥပမာ Yahoo! မှတဆင့်သူတို့၏ domains များကိုမှတ်ပုံတင်သည်။ Yahoo! သူတို့၏အုပ်ချုပ်မှုတွင်ထင်ရှားနေသော်လည်းဒိုမိန်းကိုအမှန်တကယ်မစီမံနိုင်ပါ။ သူတို့ကရောင်းတဲ့သူပဲ မြူးနစ်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သင်သည် Yahoo ၌သင်၏ DNS settings ကိုပြောင်းလဲသည့်အခါထိုပြောင်းလဲမှုများကိုအမှန်တကယ်မွမ်းမံခြင်းမပြုမီနာရီများစွာကြာနိုင်သည်။ စစ်မှန်သော ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်သူ။
သင်၏ DNS ဆက်တင်များသည်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့ကိုအင်တာနက်ရှိဆာဗာများပေါ်တွင်ဖော်ပြသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်ရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်သာကြာသည်။ ဤသည်မှာလူများကပေးဆပ်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် DNS ကိုစီမံသည်။ စီမံခန့်ခွဲထားသော DNS ကုမ္ပဏီများသည်များသောအားဖြင့် redundancy နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ကြသည်။ မကြာခဏသင်၏ domain registrar ထက်မြန်သည်။
အင်တာနက်ဆာဗာများအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးသည်နှင့်နောက်တစ်ကြိမ်သင်၏ system DNS တောင်းဆိုမှုကိုပြုလုပ်သည့်အခါသင့်ဆိုဒ်တည်ရှိသည့် IP လိပ်စာကိုပြန်ပို့ပေးလိမ့်မည်။ မှတ်စု: နောက်တစ်ခါမင်းရဲ့ system ကတောင်းဆိုမှုကိုငါပြောတာသတိရပါ။ သင်ယခင်ကထိုဒိုမိန်းကိုတောင်းဆိုခဲ့ဖူးပါကအင်တာနက်သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာစနစ်သည် DNS Cache ကို အခြေခံ၍ IP လိပ်စာဟောင်းကိုဖြေရှင်းလိမ့်မည်။
သင်၏ DNS အလုပ်လုပ်ပုံ
သင်၏ local system မှပြန်လာသောနှင့်သိမ်းဆည်းထားသော IP address သည် website တစ်ခုတည်းအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ Host တစ်ခုတွင် IP address တစ်ခုတည်း (ပုံမှန်အားဖြင့် server သို့မဟုတ် virtual server) တစ်ခုပေါ်တွင်တည်ရှိသည်မှာရာနှင့်ချီသောရာပေါင်းများစွာသောဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိနိုင်သည်။ သင်၏ domain သည် IP address မှတောင်းဆိုသောအခါသင်၏ host သည်သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုဆာဗာအတွင်းရှိဖိုင်တွဲတည်နေရာသို့လွှဲပြောင်းပြီးသင့်စာမျက်နှာကိုတင်ပြသည်။
ဒီနေရာမှာစနစ်သုံးခုရှိတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြtroublနာဖြေရှင်းဖို့စနစ်သုံးခုရှိတယ်။ ပထမ ဦး စွာသင်၏ system တွင်အိုင်ပီလိပ်စာညွှန်ပြနေသည့်နေရာကိုကြည့်ရှုရန်သင်၏ local system ကိုသာစစ်ဆေးရန်လိုသည်။
Terminal ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်ပြီးစာရိုက်တာကိုအလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သို့မဟုတ်သင်အမှန်တကယ်သတ်မှတ်ထားသော name server တစ်ခုကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
သင်၏ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်သူတွင် DNS settings ကိုသင်အဆင့်မြှင့်ပါကသင်၏ DNS cache ကိုရှင်းလင်းပြီးသင်ထပ်မံတောင်းဆိုမှုကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ OSX တွင်သင်၏ DNS cache ကိုရှင်းလင်းရန်:
sudo dnscacheutil -flushcache ပါ
သင်ပြန်ကြိုးစားနိုင်သည် ping ရဲ့ or nslookup ဒိုမိန်းသည်ယခုအချိန်တွင် IP လိပ်စာအသစ်တစ်ခုသို့ဖြေရှင်းမလားဆိုတာကြည့်ရှုရန်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ Internet DNS ဆာဗာများမွမ်းမံမှုရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ သိမ်းထား DNS ပစ္စည်းများ ဤအရာသည်အဆင်ပြေစွာ၊ သင်သည် DNSreport အပြည့်အစုံကိုသူတို့၏ platform မှတဆင့်ကောင်းကောင်းရနိုင်သည်။ Flywheel သူတို့ရှာဖွေမှုကိုသွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ၎င်း၏ပလက်ဖောင်း၌ကြီးစွာသော DNS Checker ရှိတယ် Google, OpenDNS, Fortalnetသင်၏ချိန်ညှိချက်များသည်ဝန်းကျင်တွင်စနစ်တကျပျံ့နှံ့နေမှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရန်ကွန်ယက်များနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးပါ။
ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်သင့်တော်သောအိုင်ပီလိပ်စာကိုတွေ့ရပြီးသင့်ဆိုဒ်မပေါ်လာသေးပါကအင်တာနက်ဆာဗာများကိုကျော်လွှားပြီးတောင်းဆိုမှုကိုအိုင်ပီလိပ်စာသို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့ရန်သင်၏စနစ်အားပြောနိုင်သည်။ သင်၏ hosts file ကို update လုပ်ခြင်းနှင့် DNS ကိုရှင်းလင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်ပြီးမြောက်နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် Terminal ကိုဖွင့်ပြီးရိုက်ပါ။
sudo nano / etc / host များ
သင့် system password ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်တည်းဖြတ်ရန်အတွက် Terminal မှဖိုင်ကိုတိုက်ရိုက်ဖွင့်ပေးလိမ့်မည်။ သင်၏မြှားကို အသုံးပြု၍ သင်၏ cursor ကိုရွှေ့ကာအိုင်ပီလိပ်စာနှင့်အတူနောက်လိုင်းတွင်ဒိုမိန်းအမည်ထည့်ပါ။
ဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းရန်ကိုနှိပ်ပါ ထိန်းချုပ်မှု သင်၏ကီးဘုတ်ပေါ်တွင်ဖိုင်အမည်ကိုလက်ခံရန်ပြန်သွားပါ။ နှိပ်ပြီးတည်းဖြတ်သူမှထွက်ပါ ထိန်းချုပ်မှု -x, သော command line ကိုသင်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ cache ကိုရှင်းလင်းရန်မမေ့ပါနှင့်။ အကယ်၍ ဆိုက်သည်အဆင်မပြေပါကသင့်အိမ်ရှင်အတွက်ပြlocalနာဖြစ်နိုင်သည်၊ သင်ဆက်သွယ်ပြီးသူတို့ကိုအသိပေးသင့်သည်။
နောက်ဆုံးမှတ်စု…သင်၏ hosts file ကိုမူရင်းဗားရှင်းသို့ပြန်ပို့ရန်မမေ့ပါနှင့်။ သင်အလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်တင်လိုသည့် Entry တစ်ခုကိုထိုနေရာတွင်မထားလိုပါ။
ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းသူ၌ရှိသည့်ကျွန်ုပ်၏ DNS မှတ်တမ်းများသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ DNS မှတ်တမ်းများသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ Mac ၏ DNS cache သည်နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်ကြောင်း၊ ဝက်ဘ်အိမ်ရှင်၏ DNS တက်နေကြောင်းကျွန်ုပ်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ ယနေ့အထိ ... သွားကြဖို့ကောင်းသော!
Tags: ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ping ရဲ့